Profaịlụ ụlọ ọrụ - YTO PANARA
YTO POWER bụ onye na - eweta mmanụ injin na-eduga na China na ndị enyemaka nke China YTO Group
Site na ntọala anyị na 1955, anyị agbanweela ụlọ ọrụ zuru oke nke na-emepụta ma na-enyekwa ụdị gas dị iche iche, e mepụtara YTO akara China na Brand nke Mbupu.
N'ihe banyere ihe omumu ihe omimi kariri iri isii, na mgbakwunye na akụrụngwa dị elu na ahịrịokwu ndị si Switzerland, Germany, United States, Britain, na Italytali, ekwenyesiri ike na injin igwe anyị na ntụkwasị obi dị mma.
Na YTO POWER, anyị nwere Ngalaba Nka na ụzụ (National Technical Center) maka nyocha mmanụ injin, anyị nwekwara njikọ chiri anya na ụlọ ọrụ nyocha ụwa ama ama dịka AVL na Austria, Germany FEV na Germany, YAMAHA na Japan na andlọ Ọrụ nyocha Southwest na United States. Ike nyocha anyị na ike mmepe, yana ọrụ siri ike nke ndị ọrụ anyị nwerela ọfụma, na-enyere anyị aka ịga n’ihu n’ichepụta igwe mmanụ di iche iche.
Na YTO POWER, anyị na-emepụta ngwaahịa anyị n'ụzọ kwekọrọ n'ụkpụrụ mba ụwa. Anyi bu ISO9000, ISO14000 na TS-16949, na injin di iche iche anyi ka ndi US EPA, European Emark and CE asambodo. Taa, ndị ahịa na-achọ ahịa anyị nke ọma site n'aka ndị ahịa ụwa niile.
Ugbu a, anyị nwere isi ihe nrụpụta mmanụ ụgbọ ala abụọ, otu dị na Taizhou City, Jiangsu Province, na-ekepụta YD (YANGDONG) usoro nke cylinder atọ na ngwa cylinder anọ nwere ikike site na 10kw ruo 100kw, na nke ọzọ na Luoyang City, Henan Province, na -emepụta LR na YM usoro anọ cylinder na engine nke mmanụ sịlyl isii. Ikem sitere na 100KW ruo 500kw. Site na netwọ ahịa azụmaahịa nke mba anyị, a na-ere ngwaahịa YTO POWER ugbu a n'ihe karịrị mba na mpaghara 100 na ụwa niile.
Anyị nọ na YTO POWER na-atụ anya iso ndị ahịa na-arụ ọrụ gburugburu ụwa iji mepụta ọdịnihu ka mma! Biko kpọtụrụ ndị ahịa anyị maka ozi ndị ọzọ.